နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: စားချင်တာလေးတွေ ...
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:06 PM
ဇနိ February 21, 2009 at 11:07 PM
စပိုက်ဆီဘာ ဘိုင်ရှိုးရယ် (သင်ပေးသွားတယ် ရုရှားလို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်)
ThuHninSee February 22, 2009 at 12:10 AM
ဒီလောက် စားနေရတာကို.ဟွန်း။ အားကိုမနာဘူး။
khet myint myint February 22, 2009 at 1:37 AM
ဟမ်.. ဘာကြီးလဲ.. အမွှေးတွေ..??? စီးတီးဟောမှာ ရနံ့သစ်မှာ ဒန်ပေါက်စားနေတဲ့သူတွေ့ရင် ကိုဘ လို့ ယိုးစွပ်လိုက်တော့မယ်..
Ko Boyz February 22, 2009 at 2:10 AM
နိနိ - ကျေးဇူး... ဖြည့်လိုက်ပြီ...။
သုနှင်းဆီ - ခုထိ မလေးရှားမှာပဲဗျ...။ တစ်ပတ်ကြာနေပြီ အစားသောက်ပျက်နေတာ။ အတွေးနဲ့ ပုံဖေါ်နေတာ စိတ်ပင်ပန်းလိုက်ထှာ...။
ကေကေအမ်ဝိုင်တီ - မုတ်ဆိတ်မွေးနှင့် လူတိုင်းသည် ကိုဘ မဟုတ်သလို ကိုဘသည် အမြဲတမ်း မုတ်ဆိတ်မွေးနှင့် မဟုတ်သည်ကို သတိချပ်ပါလေ...။ ဒန်တန့်တန်...။
. February 22, 2009 at 2:45 AM
ရွှတ်ခရန် (ကျေးဇူး) (အာရပ်ဘစ်လို..) shukran
khin oo may February 22, 2009 at 8:42 AM
Thank you = terima kasih (မလေးလို)
khin oo may February 22, 2009 at 8:47 AM
တယ်လီဖုံးအထွက် ခေါ်မရတာကတော့ possible reasons
1. no credit ( prepaid)
2. စတားဟက်မှ lesson ပေးထားခြင်း (bill မဆောင်သောကြောင်ှု)
3. သူညွန်ကြားထားသည့်အတိုင်း သေချာ မခေါ်သောကြောင့်
4.နားအေးပါေးအးနေလိုသောကြောင့် ဘယ်သူကို မှ ပြန်မခေါ်သည်ကို ကျားကန်ထားခြင်း
:P February 22, 2009 at 9:35 AM
Bill မဆောင်လို့ ဖြစ်မှာပေါ့.. ရှင်းနေတာပဲ ။ ဒါကို သူက ကန်ဇွန်းပလိန်းတက်မယ် လုပ်နေသေးတယ်...
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ခြင်း၊ အရင်က ရေးလေ့ရှိသည်များကိုသုံးသပ်ခြင်း၊ စီဘောက်စ်တွင်ရေးတတ်သည်များကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်
တွေ့ရသည်မှာ ဒီဘလော့ ပိုင်ရှင်သည် အစားကောင်းကြိုက်ခြင်း၊
ကြိုက်သည့်အတိုင်း မရရအောင် ဆိုင်ကောင်းများကိုရှာဖွေစားသောက်ခြင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာ ကောင်းကောင်းချက်စားခြင်း၊ စားသမျှကိုလည်း အများသူငါ သွားရည်တောက်တောက်ကျအောင် အသေးစိတ်သရုပ်ဖော်ခြင်း..
ခြုံပြောရရင်တော့ အစားအတွက် အသက်ပင်သေသေ ဟူသည့် လူမျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချပါသည်။
:P February 22, 2009 at 9:38 AM
အားစမ်းပွဲတွင် အနိုင်ရသည့်ပုံကို ခုမှ ဖွင့်ကြည့်မိတယ်..
khin oo may February 22, 2009 at 10:21 AM
khin oo may February 22, 2009 at 10:22 AM
ရှမ်းစစ်ပါက အဲဒီလောက် သွေးမဆိုး။
khin oo may February 22, 2009 at 2:26 PM
မှာ ယခင် တစ်ခေါက်က တင်ပြထားပုံ ဖြစ်သည်ဟု သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာရှိသည်။
ပုံသစ်ဖြစ်ကြောင်း evidence ပြရန်မခိုင်လုံ။
Ko Boyz February 22, 2009 at 2:55 PM
ပန်းနွယ် စကားလုံးအသစ်အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်။
အန်တီဂွိ မလေးမေ့နေတယ်..။ ဟုတ်ပါ့ ပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်။
တယ်လီဖုန်း ရီဆန်လား။ ဟိဟိ...။ လက်လန်တယ်...။ အမ်းမားရယ်..။ ခြေခွင်တယ်။ ခေါင်းစောင်းတယ်။ ပါးစပ်ပါရွဲ့တယ်ဗျာ...။
ရှမ်းသွေး ဗမာသွေး တရုတ်သွေး ဘာကြည့်ပြီး ခွဲတာပါလိမ့်...။
ပုံသစ်လား ပုံဟောင်းလားဆိုတာကို သေချာ နှစ်ပုံစလုံး ယှဉ်ကြည့်ပြီးမှ ပြောပါလေ.. အန်တီဂွိ...။ သက်သေ အထောက်အထား အပြည့်အစုံနဲ့ လာငြင်းပါ...။
ဆင်ဆင် ယူက ဘာမို့လို့ အိုင့်ကို အနာလိုက်စစ်နေတာလဲ...။ အနာလဲ မပေါက်ပဲနဲ့... သူ့ဟာသူ ကောက်ချင်ရာကောက် နုတ်ချင်ရာ နုတ်နဲ့.. ကောက်ချက်တွေ ကောက်နုတ်ချက် တွေ လာလုပ်နေတယ်...။ ဟိ... သူလဲ အားစမ်းပွဲပုံ မြင်ပြီးပြီပဲ..။ ပျော်ထှာ...။
may February 22, 2009 at 11:18 PM
Ko Boyz February 22, 2009 at 11:59 PM
မမေရေ...။ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်နှစ်ခု သွားကြည့်လိုက်ပါတယ်...။
ပထမလင့်ခ်မှာ ပါတဲ့ တစ်ခုက ဇင်းမယ်ရိုးရာ ၀က်အူချောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျိုင်းတုံ ၀က်အူချောင်းနဲ့ ဆင်တယ်...။ ကျွန်တော်တောင် တင်ထားသေးတယ်။ ဒီမှာပါ။
နံပါတ်၂ ကျိုင်းတုံ ၀က်အူချောင်းလို့ နာမည်တပ်ထားတဲ့ စားစရာပါ။
- ဒုတိယလင့်ခ်မှာ ပါတဲ့ တစ်ခုကတော့ ၀က်သားချဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါက်ယေ့တ်ဆိုက်ကတော့ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ တစ်ခါ တင်ထားပါတယ်...။ အခု ပြန်ရှာတာ မတွေ့တော့ဘူး။ နောက်မှ ပြန်တင်ပေးမယ်။
ခေါက်ယေ့တ်ဆိုက်ဆိုတာ ၀က်အူဖြစ်ဖြစ် ကြက်အူဖြစ်ဖြစ်အဲဒါကို ချဉ်နေတဲ့ ထမင်းကို ထည့်ထားပြီး မီးကင်ထားတဲ့ ထိုင်းစားစရာ တစ်မျိုးပါ...။
နိုင်းနိုင်းစနေမှာတော့ တာချီလိတ်ပွဲ မှာ သူရိုက်ထားတာ ပြပါတယ်။
သူက ထိုင်းဝက်သားချဉ်လုံးလုိ့ ရေးထားတယ်။ တစ်ကယ်က ထမင်းချဉ်လုံးပေါ့လေ...။
Ko Boyz February 23, 2009 at 12:00 AM
မမေ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်နှစ်ခုစလုံးက ခေါက်ယေ့တ်ဆိုက် မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောဖို့ မေ့သွားတယ်...။
ToMMyGiRL February 23, 2009 at 1:02 AM
မီယာ February 23, 2009 at 3:38 AM
ကိုဘ အစားအသောက်ပျက်ရှာတာကိုး... အိမ်မှာ မရှိတာ မသိလိုက် ပြန်ရောက်မှ မုန့်လာစားမည်
Ko Boyz February 23, 2009 at 10:49 AM
ဘာလို့ ရေးပြီးသား ကော်မန့်တွေ ဖျက်ပစ်တာလဲ မသိဘူး။ နှမြောစရာတွေ...။ ဘာတွေ မလွှတ်မကင်းတွေ ပါတာပါလိမ့်...။
khin oo may February 24, 2009 at 6:21 AM
ကွန်မက်အရှညကြီးရေးပြီးတင်လိုက်တယ်။ ပျောက်သွားတယ်။ သင်ဇာတာ နိမ့်နေသည်။ ရေးပြီးမှ ဖျက်မိတာက တစ်မျိူး။တင်ပြီတော့ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတာက တစ်မျိူး။
khin oo may February 24, 2009 at 6:23 AM
လိုရင်းပြန်ပြောရရင် ကွန်မက်တွေ ကိုလာရေးပြီးဖျက်သွားသူတွေ များနေတယ်။ နောက်တစ်ခု ပြန်လိုက်လည်လို့လဲ မရဘူး အဲဒါ ကို စိတ်မကောင်းပါ။ ဒါကြောင့်တန်လ်ာသမိးကို မုန့်ကျွေးခြင်းဖြင့်ယတြာပြူဘို့ အကြံ့ပူပါ၏၏၏၏၏
khin oo may February 24, 2009 at 7:26 PM
စားချင်တာလေးတွေ တွေးတွေးပြီး တေးထားတာလေးတွေ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပြီလား။
ဘူးဂစ်၊ လာဗဲန်းဒါးနဲ့ စီးတီးဟောရေ.... ကိုယ်လာပြီ...။
သနားပါတယ်. သူ့မှာ ကြိမ်းဝါးစရာ ဘူးဂစ်။လာဗန်းဒါးနဲ့ စီတီးဟောဘဲရှိရှာတယ်။